Merkel oo booqatay Turkiga - BBC News Somali
Merkel oo booqatay Turkiga
18 Oktoobar 2015
Hoggaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel, oo booqatay Turkiga, ayaa wadahadalo la yeelatay madaxda dalkaasi.
Merkel, waxay sheegtay in wada hadalladu ay ku saabsanaayeen sidii culayska loola qaybsan lahaa Turkey-ga, iyada oo qirtay cadaadiska Turkey-ga ka haysta martigelinta laba milyan oo qaxooti reer Suuriya ah iyo boqollaal kun oo Ciraaqiyiin ah.
Waxay sheegtay in Midowga Yurub ay gacan dheeraad ah siin doonaan Turkey-ga. Laakiin hoggaamiyaha Jarmalku, waxay mar kale ku celisay in aanay doonayn in Turke-gu ay ku biiraan Midowga Yurub, sidaas awgeed ballan qaadyada ah in la dedejiyo soo gelitaanka Turkey-ga ee Midowga Yurub, waxay u muuqdaan kuwa aad u fog. Waxaa intaas dheer, Turkey-gu waxay ku dheggan yihiin in dhibaatada qaxootiga lagu xalliyo halka ay ka imanayso.
Ra'iisal wasaaraha Turkey, Axmed Davutoglu, waxaa uu yiri waa in aag ammaan ah laga sameeyo dalka Suuriya gudihiisa, fikraddaas oo reer galbeedku aanay aad u taageersanayn. Dadka wax naqdiya waxay sheegayaan in booqashada Mrs Merkel ay siin doonto madaxweyne Erdogan taageero hagar la'aaneed iyadoo laba toddobaad oo keliya ay ka harsan tahay doorasho, ayna indhaha ka qabsanayso dhibaatooyin waaweyn ee xuquuqda aadanaha oo dalka Turkey-ga ka jira. Hase yeeshee siyaasad dhab ah ayay u tahay Mrs Merkel iyo run ahaantii Midowga Yurub oo Turkey-ga haatan ugu baahan si intii hore oo dhan badan.